State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi receives Indian Delegation led by the Foreign Secretary of India – EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
(5-10-2020, Nay Pyi Taw)
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs of Myanmar, received the Indian delegation led by Mr. Harsh Vardhan Shringla, Foreign Secretary of the Ministry of External Affairs of India, at 9:30 a.m. on5October 2020 at the Ministry of Foreign Affairs.
Present at the courtesy call were U Thaung Tun, Union Minister for Investment and Foreign Economic Relations, U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation, and senior officials of the Ministry of Foreign Affairs of Myanmar. The Indian delegates also include General Manoj Mukund Naravane, Chief of Army Staff, Mr. Saurabh Kumar, Ambassador of India to Myanmar and responsible officials from India.
At the courtesy call, they cordially exchanged views on the matters pertaining to the further advancement of bilateral relations and strengthening cooperation between Myanmar and India in various areas including trade and investment, connectivity, transport, energy, development projects, capacity building and people to people linkages as well as issues of mutual interest. They also discussed the possibility of joint production of COVID-19 vaccine which India is currently developing, with partner countries including Myanmar, operationalization of the Sittwe Port in the early part of 2021, conducting vocational training programmes for youth in Rakhine State and exchange of visits of parliamentarians and the youth.
After the call, the State Counsellor acceptedatotal of 3,000 vials of Remdesivir for the treatment of COVID-19 patients, donated by the Government of India to the Government of Myanmar.
During the visit of the Indian delegation to Myanmar, the Project Agreement for upgrading of Agricultural Mechanization Sub-station to promote custom hiring services under Rakhine State Development Programme was signed between the Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation of Myanmar and the Embassy of Indian in Yangon and the Centre of Excellence in Software Development and Training (CESDT) in Myitkyina, Kachin State was inaugurated.
(၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန် Mr. Harsh Vardhan Shringla ဦးဆောင်သော အိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက်၊ နံနက် ၀၉ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံပွဲသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန်နှင့်အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် (Chief of Army Staff) General Manoj Mukund Naravane ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Saurabh Kumar နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနှင့် ဆက်ဆံရေးပိုမိုတိုးမြှင့်ရေး ကိစ္စရပ်များ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပေါင်းစည်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ စွမ်းအင်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြည်သူအချင်းချင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု နယ်ပယ်များ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြား ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် အခြားအကျိုးတူ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး အောင်မြင်ပါက မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် မိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်သွားနိုင်ရေး၊ စစ်တွေဆိပ်ကမ်းအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလတွင် လည်ပတ်သွားနိုင်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူငယ်များအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားနိုင်ရေးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူငယ်များ အပြန်အလှန် ဖလှယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် အိန္ဒိယအစိုးရက မြန်မာအစိုးရထံသို့လှူဒါန်းသည့် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကုသရေးတွင် အသုံးပြုမည့် Remdesivir ထိုးဆေး (၃,၀၀၀) ကို နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန်ထံမှ လွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန်၏ မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်သည့် ခရီးစဉ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်အောက်မှ စက်မှုလယ်ယာစခန်းခွဲများအား အဆင့်မြှင့်တင်၍ စက်မှုလယ်ယာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း စီမံကိန်း သဘောတူညီချက်အား စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် အိန္ဒိယသံရုံးတို့အကြား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားထုတ်လုပ်မှုနှင့် လေ့ကျင့်ရေး အဆင့်မြင့်သင်တန်းဌာန (Centre of Excellence in Software Development and Training-CESDT) ကို စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။